मेसीको कीर्तिमानमा डेम्बेलेको हात
असोज ०६, २०७५ बिगुल
बार्सिलोना (एजेन्सी)– फ्रान्स तथा बार्सिलोनाका विंगर ओसमाने डेम्बेलेसँगको साझेदारीमा लियोनल मेसीले सिजनको सुरुवाती चार खेलमा बार्सिलोनालाई लगातार जित दर्ता गराउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका छन् ।
यसै क्रममा बार्सिलोनाले मंगलबार च्याम्पियनस लिगमा पिएसभीविरुद्ध ४–० को सानदार जित दर्ता गर्दा मेसीले ह्याट्रिक गर्दै कीर्तिमान राखेको थिए । उक्त खेलमा डेम्बेले पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । उनले खेलको ७४ औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई आफ्नो पक्षमा पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । डेम्बेलेले यस सिजन सानदार सुरुवातको आनन्द लिएका छन् । उनले यस सिजन सबै खाले ६ खेलमा पाँच गोल गर्दै आफुलाई टोलीको अभिन्न पाटो रहेको सावित गरेका छन् ।
पछिल्लो सिजन नयाँ परिवेशमा अनुकूल हुनका संघर्ष गर्दागर्दै उनले चोट बोकेका थिए । तर, यस सिजन उनी नयाँ आत्मविश्वासका साथ खेलिरहेका छन् । उनको तीव्र गति र खेलमा डटने क्षमताले बार्सिलोनालाई एक नयाँ आवरण दिएको छ । पछिल्लो सिजन नेयमार पेरिस सेन्ट जर्मेनमा अनुबन्धित भएपछि उनको कमीको महसुस भएको थियो । डेम्बेलेले भालाडोलिड र सोसिडाडविरुद्धको खेलमा बार्सिलोनाको जितमा निर्णयक गोल गरेका थिए । उनले स्पेनिस सुपर कपमा पनि सेभिल्लाविरुद्ध निर्णायक गोल गर्दै जित दिलाए ।
च्यम्पियन्स लिगमा उनले बार्सिलानाका लागि दोस्रो गोल गरेका थिए । पीएसभीविरुद्धको जित पछि प्रशिक्षक भाल्भार्डेले भने, ‘डेम्बेले राम्रो गरिरहेका छन् । यो सबै उनको कडा मेहनतको फल हो, ’ उनले थपे, ‘उनी टिमका लागि मद्दत गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । उनी विपक्षीलाई असन्तुलन गर्न सक्षम भएका छन् । यो कुरा अब उनीबाट निरन्तर पाउनेमा विश्वस्त छौ ।’
प्रकाशित : शनिबार, असोज ०६, २०७५०८:१५
सन्दीप विश्वभर धेरै देशमा क्रिकेट खेल्ने खेलाडीको सुचिमामा परे !
सन्दीपको खेलको चर्चासंगै परिवार पनि दंग: के भन्नुहुन्छ सन्दीपका बुवाआमा ?
आज सन्दिप लामिछानेले चेन्नईका विरुद्ध खेल्दै: खेल खेल्नु के भने सन्दीपले ( भिडियो )
लिभरपुल र आर्सनलको रोमाञ्चक खेल आज
नेपालकी सञ्जु चौधरीले राखिन् ३ वटा राष्ट्रिय कीर्तिमान
रियल र बार्सिलोना १ महिनामा तीनपटक आमने–सामने हुने ! कहिले-कहिले भिड्दै छन् ? हेर्नुहोस् !
इन्डोनेसियामा चम्किए नेपाली खेलाडी, इन्डोनेसिया डर्बीमा रोहितको गोल ! [भिडियो सहित]